Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zaseJamaica zokuPhula » I-Expedia ibona ukukhula okumangalisayo kweJamaica
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Caribbean • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zaseJamaica zokuPhula • iindaba • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo
Iintlanganiso zaseJamaica kunye ne-Expedia
Abaphathi abaphezulu e-Expedia Inc., eyona arhente inkulu yokuhamba kwi-Intanethi kwihlabathi kunye nomvelisi omkhulu weshishini lokhenketho eJamaica, baqinisekisile uMphathiswa wezoKhenketho, u-Hon. U-Edmund Bartlett, kunye namanye amagosa aphezulu ukuba "idatha yabo ibonisa ngokucacileyo igumbi elinomdla ebusuku kunye nokukhula kwabagibeli ngeemetrikhi zombini ezigqitha ixesha elifanayo kwi-2019." Bakwaphawule ukuba i-United States yaseMelika ihleli iyeyona ntengiso iphambili yaseJamaica.
Ingcaciso eyimfihlo enkulu yohlalutyo lwedatha ibibanjelwe kwiofisi yecandelo le-Expedia Inc.eMiami, eFlorida, izolo, ngoMvulo, nge-27 Septemba 2021.
Ngelixa kukho iinkxalabo ezinxulumene ne-COVID-19, ukuzithemba kwabachaphazelekayo kwezokhenketho eziphambili e-US malunga nokukhula eJamaica kuhlala kunamandla kakhulu.
IJamaica iyaqhubeka nokuqinisa ukhuseleko lweeNdawo eziHlanganisiweyo.
Iindaba ezamkelekileyo ziza ngaphandle kokucothisa imfuno yokuhamba ebangelwe kukusasazeka kweDelta eyahlukileyo ye-COVID-19 kunye nemicimbi ehambelana nayo. Ukucothiswa kube nefuthe elibi Icandelo lezokhenketho laseJamaica, nangona kunjalo, kukho ukuzithemba okukhulayo ukuba imeko izakujika ibengcono kungekudala.
UBartlett uqaphele: “Ukuza kuthi ga ngoku ukudibana kwethu nabachaphazelekayo kwezokhenketho eMelika kube kuhle. Kukho iinkxalabo ezinxulumene ne-COVID-19, nangona kunjalo, ukuzithemba ekukhuleni kwe- IJamaica ihlala yomelele kakhulu. Siza kuqhubeka sishiya nto ngamathuba kwaye siqinise ukhuseleko lweeNdawo eziHlanganisiweyo, ukuphucula kwethu kunye nendlela yethu yokugonya i-COVID-19 kumanqanaba okugonya kwicandelo lezokhenketho nenyaniso elula yokuba iJamaica yeyona ndawo ingcono yokuya eholideyini kwiCaribbean. ”
Inkcazo-ngcaciso eyimfihlo kakhulu ye-data analytics ibibanjelwe kwi-ofisi ye-Expedia Inc. e-Miami, eFlorida ngoMvulo, nge-27 kuSeptemba, ngo-2021. UMlawuli wezoKhenketho, uDonovan White; IQhinga eliPhezulu kwiCandelo loMphathiswa Wezokhenketho, uDelano Seiveright kunye noSekela Mlawuli wezoKhenketho kumazwe aseMelika, uDonnie Dawson. Ukuzibandakanya kwe-Expedia yenye yeendibano zeentlanganiso neenkokheli zeshishini lokuhamba, kubandakanya ii-Airlines ezinkulu, i-Cruise Lines kunye nabatyali mali, kwiimarike ezinkulu zaseJamaica, eUnited States naseCanada. Oku kwenzelwa ukwandisa ukufika kwabo bazakufika kwezi veki neenyanga zizayo, kunye nokukhuthaza utyalomali olongezelelekileyo kwicandelo lokhenketho lwasekhaya.
I-Expedia Inc.kwayinkampani yesithathu ngobukhulu yokuhamba e-US, kunye nenkampani yesine ngobukhulu yokuhamba emhlabeni. Iiwebhsayithi zayo, ikakhulu ezizii-aggregators kunye ne-metasearch engines, kubandakanya i-Expedia.com, iVrbo (eyayisakuba yi-HomeAway), Hotels.com, Hotwire.com, i-Orbitz, iTvelovelocity, i-trivago kunye neCarRentals.com.